အမေရိကန်နှင့်ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်နေသော တောင်ကိုရီးယားကို မြောက်ကိုရီးယား ခြိမ်းခြောက် |
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယား နှစ်နိုင်ငံအကြားမှာ သဘောထားတင်းမာမှုတွေ တစ်ကျော့ ပြန်လည် မြင့်တက်လာပြီး တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အမေရိကန်နဲ့ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို မြောက်ကိုရီးယားဘက်က ခြိမ်းခြောက်မှုတွေလုပ်နေကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံအကြားမှာ Hotlines ဆက်သွယ်မှုတွေ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီး သီတင်းပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာပဲ တောင်ကိုရီးယားက မြောက်ကိုရီးယားဘက်ကို ဖုန်းဆက်သွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မြောက်ကိုရီးယားဟာ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့် ဖုန်းလက်ခံဖြေဆိုခြင်း မရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားမရနိုင်ဖြစ်ရကြောင်း တောင်ကိုရီးယားက အသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင် ကင်ဂျုံအန်ရဲ့ညီမဖြစ်သူ ကင်ယိုဂျောင်ဟာ အမေရိကန်နဲ့ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအတွက် တောင်ကိုရီးယားအနေနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့တန်ကြေးတစ်ခု ပြန်ပေးရလိမ့်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်သွားခဲ့ပြီး မြောက်ကိုရီးယားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ဟာ အရင်တုန်းကထက် အဆပေါင်းများစွာ အားကောင်းနေပြီဆို တာကို သဘောပေါက်နားလည်ဖို့လိုတယ်လို့လည်း ကင်ယိုဂျောင်က အသိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
၁၉၅၃ ခုနှစ်တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲအပြီးမှာ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကာ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွေကို ရပ်တန့်ပစ်လိုက်ပေမယ့် နည်းပညာအရ တိုက်ပွဲတွေကတော့ ဒီနှစ်နိုင်ငံအကြားမှာ ဒီကနေ့အထိ ဆက်ရှိနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားနဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတို့ဟာ တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံအကြား Hotlines နဲ့ဆက်သွယ်မှုကို တစ်ရက်မှာ နှစ်ကြိမ်စီ ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး အပြန်အလှန် စကားပြောဆိုဖို့ သဘောတူညီထားပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားက တောင်ကိုရီးယားရဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကို အလေးမထားတာတွေ ရှိလာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
North Korea threatens South Korea to conduct joint military exercises with US
Tensions between South and North Korea have risen again, with North Korea threatening to hold joint military exercises with the United States.
South Korea called North Korea just weeks after the two countries reopened hotlines, and South Korea said it could not think of any reason why North Korea did not answer the phone.
Kim Jong-un, the sister of North Korean leader Kim Jong-un, has threatened to return South Korea toafair price for joint military exercises with the United States, and Kim Jong-un has said it needs to understand that North Korea’s combat capabilities are many times stronger than before. After the war in 1953, the two Koreas signedaceasefire agreement to end the conflict, but technical fighting between the two countries continues to this day.
South Korea and North Korea have agreed to regularly check their hotlines twiceaday to communicate with each other, but North Korea has so far ignored South Korea’s phone calls.
Next Article ဓာတ်အားလိုင်းအသစ် တည်ဆောက်ဖို့ မနက်ဖြန် (၃၀ နိုဝင်ဘာ) ရန်ကုန် ၅ မြို့နယ် မီးပျက်မည်